Sidaan baa adiga usoo codsan baasaaboorka yar - Migrationsverket
Order documents or copies
/ Af soomaali
/ Difaac iyo magangelyo oo Iswiidhan
/ Markii codsigaada magangelyada go’aan laga gaaro
/ Haddii laguu oggolaado inaa joogtid
/ Baasaaboor yar
/ Sidaan baa adiga usoo codsan baasaaboorka yar
Sidaan baa adiga usoo codsan baasaaboorka yar
Så ansöker du om resedokument – somaliska
Markaa dooneysid inaa soo codsatid baasaaboorka yar waa inaa adiga soo buuxisaa foomka Codsashada baasaaboorka yar, oo foomka lambarka 108021 [Ansökan om resedokument, nr 108021], iyo waa in adiga shakhsiyan soo booqataa oo keenta xafisyada Hey’adda socdaalka oo oggolanshada bixiyo midkood.
Haddii aad haysatid canug u baahan baasaaboorka yar waa inaa codsi shakhsiyan usoo suubisaa canugaas. Carruurta oo 18 sano ka yar kaligood ma soo codsankaran baasaaboorka yar. Canuga qofka mas’uulka ka ah ama qofka mas’uulka looga dhigay baa u soo codsankarto canuga baasaaboorka yar, oo shakhsiyan soo booqdo Hey’adda socdaalka.
Haddii canugu uu leeyahay laba mas’uul waa khasab in labada waalid ay ansaxiyaan codsiga oo ey soo wada saxiixaan codsiga foomka canuga. Haddii labada mas’uul mid ka mid ahi uu u soo raacayo Hey’adda socdaalka canuga oo keenayo codsiga waxaa khasab ah in mas’uulka kale uu soo saxiixo foomka codsiga. Saxiixaasna waxaa khasab ah in qof saddexaad uu markhaati ka yahay.
Codsashada baasaaboorka yar, lambarka foomka 108021 (oo iswiidhish)
Application for travel document, form number 109021 (oo ingiriis)
Wakhti ballanso sidaa codsiga noogu keeni kartid
Inta aadan soo booqan Hey’adda socdaalka sidaa noogu keentid codsigaada waa inaa wakhti ballansataa. Kuna fikir in dhammaan inta kula codsaneyso baasaaboorka yar waa iney ku soo raacaan, carruurta xitaa. Qofkasto waa inuu shakhsiyan codsi keensadaa oo wakhti qaas la siiyo. Adiga waxaa ballamin kartaa dhowr wakhti oo isku xigo.
Wakhti ballanso sidaa codsigaada usoo gudbin kartid www.migrationsverket.se/book-appointment
Soo booqo Hey’adda socdaalka
Markaa codsigaaga noo keeneysid waa inaa horey u soo qaadataa:
foomka codsiga, oo aad soo buuxisay iyo soo saxiixday (qofkiiba hal foom). Kuna fikir iney khasab tahay in labada waalid oo mas’uulka ah ey soo saxiixan foomka markaa usoo codsaneysid baasaaboorka yar canug
baasaaboorkaadi oo wadankaadi hooyo ama dokumenti kale oo shakhsigaa tahay caddeyneyso (waa haddii aad baasaaboor la’aan tahay), tusaale ahaan kaarka aqoonsiga, caddeynta dhallashada ama buuga militeriga
kobi oo dacwada boliiska oo ey ku qorantahay inuu kaa dhumay baasaaboorkii yara (haddii adiga soo codsaneysid mid cusub oo baasaaboorka yar oo kii aad haysatey kaa dhumay).
Haddii aad haysatid baasaaboorkii oo wadankii hooyo ama mid horey oo baasaaboorka yar waa khasab inaa kuwaas i keentid Hey’adda socdaalka. Marmar wuu kaa yeelikara shaqaalaha kobi oo baasaaboorkaada iyo codsigaada, laakin adiga markaasna waxaa lagugu dhihi doonaa keen baasaaboorka rasmiga, markii la gaaro in laga shaqeeyo codsigaada ama markaa soo doonaneysid baasaaboorkaada cusub.
Hey’adda socdaalka weey ku sawiri iyo sawiri farahaada marka aad keeneysid codsigaaga. Sawirkaada, farahaada iyo warbixinta shakhsigaaga waxaa lagu keedin elektaroonig ahaan baasaaboorka yar. Warbixinadaan lagu ma keedinaayo Hey’adda socdaalka, oo waxey kaliya ku jiran kaarka elektaroonig ahaan. Carruurta oo lix sano ka yar ma u baahna in fara laga sawiro.
Waxaa dhicikarto inaa adiga ka jawaabtid su’aalo ku saabsan haddii aad haysatid fursad aad ku helikartid baasaaboor oo wadankii hooyo ama dokumenti u dhigmo baasaaboor. Haddii ey ku quseyso waxaa lagu siin foom oo su’aalo ku qoranyahiin markaa booqasho ugu imaatid Hey’adda socdaalka oo codsigaaga keeneysid.
Hey’adda socdaalka weey ka shaqeyn codsiga
Bogga internetka oo Hey’adda socdaalka ayaad ka akhrisan kartaa wakhti ey qaadaneyso ka shaqeynta codsiga iminka la joogo. Go’aanku wakhti dheer ayuu qaadanayaa haddii shaqaalaha kaa soo codsadaan warbixin dheeraad ah. Sidaas daraadeed soo wada raaci waraaqaha oo dhan, oo aanan anaga ugu baahan inaa kaa soo dalbano inaa soo dhameystirtid codsigaaga.
Markey Hey’adda socdaalka ka shaqeyneyso codsigaaga oo baasaaboorka yar waxey warbixin ka dalban liiska booliiska oo dambiilayaasha iyo kuwa laga shakisanyahay.
Iminka la joogo wakhtiga ey qaadaneyso ka shaqeynta baasaaboorka yar
Adiga go’aanka baa heli
Go’aanka waxaa laguugu soo diri bostada oo ciwaanka gurigaada. Haddii ey Hey’adda socdaalka go’aamiso inaa xaq u leedahay baasaaboorka yar waxaa kuu soo direynaa fa’riin oo inaa baasaaboorka yar soo doonankartid. Waxey qaadankartaa ilaa 14 maalmood oo laga soo xisaabinaayo maalintii go’aanka laga gaaray iyo markaa soo doonankartid baasaaboorka yar, oo ka soo doonankartid qeybta oggolanshada bixiso oo ah meesha codsiga keentay.
Adiga rafcaan waa qaadankarta go’aanka Hey’adda socdaalka haddii diidmo lagaa siiyay codsigaadi oo baasaaboorka yar.
Wakhti ballanso sidaa usoo doonatid baasaaboorka yar
Adiga oo la siinaay baasaaboorka yar waa inaa wakhti ballansataa intaadan booqasho ugu imaan Hey’adda socdaalka. Kuna fikir waa in qofkasto oo shakhsi oo baasaaboorka yar soo doonanaayo wakhti ballansadaa. Haddii aad u soo dooneysid carruurtaada baasaaboorka yar waa khasab inaa canugkasto shakhsiyan wakhti u ballamisaa.
Ka soo doono baasaaboorka yar Hey’adda socdaalka
Adiga waa inaa shakhsiyan baasaaboorkaada soo doonataa. Carruurta da’dooda ka yar tahay 18 sano waxaa baasaaboorka yar u soo doonikaro qofka mas’uulka ka ah ama qofka mas’uulka looga dhigay, oo ma u baahna in canuga soo raaco.
Canuga 15 sano ka weeyn wuu soo doonankara baasaaboorka yar, waa haddii Hey’adda socdaalka u qoran tahay iney waalidka mas’uulka arrintaas ey sheekteen markii codsiga soo gudbinaayeen.
Adiga waa inaa kharash bixisid markaa soo doonaneysid baasaaboorka yar. Adiga kharashkaas waxaa ku bixin kaar oo qeybta oggolanshada bixiyo markaa imaatid Hey’adda socdaalka.
Kharashyada oo baasaaboorka yar
Qofka wadanka Iswiidhan u soo guuraya
Ka shaqeeyn Iswiidhan
Difaac iyo magangelyo oo Iswiidhan
Quseyso codsashada magangelyada
Markii codsigaada magangelyada go’aan laga gaaro
Haddii laguu oggolaado inaa joogtid
Oggolaanshaha daganaanshaha joogada ah ee magangalya doonka ah
Oggolaanshaha daganaanshaha ee kuwa la siiyay heerka qaxootiga
Ruqsadaha daganaanshaha ee kuwa la siiyay heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo
Isu keenista qoyska
Haddii aad haysatid codsigaaga magangalyada la diiday
Waxa loogu tala­galay shak­hsiga ​qofka khani­iska ah ee doonay magan­ga­lyada
Su’aalaha caadiga ah iyo jawaabahooda
Caawinad quseyso adiga ku sugan nolol xoogsheegasho iyo hanjabad
Kabax waddanka Iswiidhan